Entertainment Archives - Shwe Khit Online TV
October 25, 2021 Yan 0
ဒီတစ်ခါမှာတော့ ပရိသတ်ကြီးကို ကမ္ဘာပေါ်မှာ အချောဆုံးရယ်လို့ သက်မှတ်ခံထားရတဲ့ အမျိုးသမီးတွေ အကြောင်း ပြောပြပေးမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ( ၂၀၂၁ ) ခုနှစ်ရဲ့ အချောဆုံး အမျိုးသမီးစာရင်းထဲမှာ ဘယ်သူတွေ ပါဝင်ကြမလဲဆိုတာကတော့ အောက်ကပုံလေးတွေ တစ်ပုံချင်းစီကို ကြည့်လိုက်ပါဦးနော် …. shwekhitonlinetv.com ၁၀ ။ Mila Kunis အမေရိကန် သရုပ်ဆောင် အနုပညာရှင်တစ်ဦး ဖြစ်တဲ့ Mila Kunis ကတော့ သူမ […]
ကမ္ဘာကျော် Rapper (၈) ဦးရဲ့ ပိုက်ဆံတွေကို ရူးသွပ်စွာ သုံးဖြုန်းခဲ့ပုံများ
October 13, 2021 Shwe Khit Online TV 0
ဥစ္စာဓန ကြွယ်ဝတဲ့သူတွေ အနေနဲ့သူတို့ရဲ့ များပြားလှတဲ့ငွေတွေကို ဘယ်လိုတွေသုံးဖြုံးကြသလဲဆိုတာ ပရိသတ်ကြီးအနေနဲ့ တစ်ခါတစ်ရံ တွေးတောဖူးမယ်ထင်ပါတယ်။ မတွေးတောဖူးရင်လည်း ကိစ္စမရှိပါဘူးနော်။ ဒီစာလေး ဖတ်ကြည့်ပြီးရင်တွေးတော ချင်စိတ်ပေါက်သွားမှာ ကျိန်းသေပါတယ်။ shwekhitonlinetv.com နာမည်ကျော်ကြားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တော်တော် များများကတော့ မိမိတို့ရဲ့ ငွေကြေးတွေကို အများအကျိုးအတွက် သုံးတဲ့သူတွေရှိတာပရိသတ်ကြီးလည်း သိပြီးဖြစ်မှာပါ။ ဒါပေမယ့် အခု လူတွေကတော့ စဉ်းစားလို့မရအောင်ကို ငွေကြေးတွေကို မထင်မှတ်တဲ့အရာတွေအတွက် ရူးသွပ်စွာသုံးစွဲခဲ့တဲ့သူတွေပါ။ နာမည်ကျော် ရက်ပါတွေလို့ပြောရင် ပိုမှန်ပါလိမ့်မယ်။ ဘယ်သူတွေ ဒီစာရင်းမှာ […]
September 22, 2021 Yan 0
ပရိသတ်ကြီးကို ဒီတစ်ခါမှာတော့ ရုပ်ရှင်ထဲမှာတင် မဟုတ်ပဲ တစ်ကယ့်အပြင်မှာ Hero လုပ်ခဲ့ကြတဲ့ သရုပ်ဆောင်တွေ အကြောင်း ပြောပြပေးသွားမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီအထဲမှာ ကိုယ်အားပေးတဲ့ သရုပ်ဆောင်တွေ ပါလားဆိုတာကတော့ အောက်ကပုံလေးတွေ တစ်ပုံချင်းစီကို ကြည့်လိုက်ပါဦးနော် …. shwekhitonlinetv.com ၁ ။ Benedict Cumberbatch ( ၂၀၁၈ ) ခုနှစ်တုန်းက Benedict Cumberbatch ဟာ Devilery ကောင်လေးတစ်ယောက် ဆီကနေ […]
နာမည်ကြီး သရုပ်ဆောင်တွေ အောင်မြင်ကာစ အချိန်နဲ့ ယခုလက်ရှိ တို့ကို နှိုင်းယှဉ်ထားတဲ့ ပုံများ
September 13, 2021 Yan 0
ပရိသတ်ကြီးကို အခုတစ်ခါမှာ ပြောပြပေးချင်တဲ့ အကြောင်းအရာလေးကတော့ နာမည်ကြီး သရုပ်ဆောင်တွေရဲ့ အောင်မြင်ကာစ အချိန်တုန်းက ပုံ နဲ့ လက်ရှိပုံတို့ကို နှိုင်းယှဉ်ထားတဲ့ ပုံတွေ အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ အခု ပြောပြပေးမယ့် အထဲမှာ ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ Idol တွေ ပါလားဆိုတာကိုတော့ အောက်ကပုံလေးတွေ တစ်ပုံချင်းစီကို ကြည့်လိုက်ပါဦးနော် …. shwekhitonlinetv.com ၁ ။ Sylvester Stallone ပထမဦးဆုံး ပြောပြပေးမယ့် သူကတော့ […]
နာမည်ကြီး ဇာတ်ကားတွေရဲ့ နောက်ကွယ်က ထင်မှတ်မထားတဲ့ ရိုက်ကွင်းပြင်ဆင်မှုများ
September 8, 2021 Yan 0
အခုတစ်ခေါက်မှာတော့ ပရိသတ်ကြီးကို ပြောပြပေးချင်တဲ့ အကြောင်းအရာလေးကတော့ နာမည်ကြီး ဇာတ်ကားတွေကို ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ နောက်ကွယ်က behind scences တွေ အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီ အထဲမှာဆိုရင် ဇာတ်ကားတစ်ကားကို ရိုက်ကူးတဲ့ အခါ ဘယ်လို နည်းပညာတွေကို သုံးပြီး ရိုက်ကူးထားလဲဆိုတာ ဖော်ပြထားတာမို့လို့ ပုံတစ်ပုံချင်းစီကို ကြည့်လိုက်ပါဦးနော် ။ shwekhitonlinetv.com ၁ ။ Justice League DC Universe ထဲက […]
ကမ္ဘာ့စျေးအကြီးဆုံး ဇိမ်ခံကားတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားကြတဲ့ ကမ္ဘာတစ်လွှားက မိန်းမပျိုလေးများ
September 3, 2021 Yan 0
ပရိသတ်ကြီးကို ဒီတစ်ခါပြောပြပေးမယ့် အကြောင်းအရာလေးကတော့ နာမည်ကြီး ဇိမ်ခံကားတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ကမ္ဘာပေါ်က နာမည်ကြီး အမျိုးသမီးတွေ အကြောင်းကို ပြောပြပေးသွားမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီအထဲမှာ ဘယ်သူတွေ ပါမလဲဆိုတာကတော့ အောက်ကပုံလေးတွေ တစ်ပုံချင်းစီကို ကြည့်လိုက်ပါဦးနော် …. shwekhitonlinetv.com ၁ ။ Nicki Minaj အမေရိကန်နိုင်ငံက နာမည်ကြီး အနုပညာရှင် တစ်ယောက်‌ ဖြစ်တဲ့ Nicki Minaj ကတော့ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းက သူမကို […]
September 2, 2021 Shwe Khit Online TV 0
WWE နပန်းလောကမှာ The Rock လို့နာမည်ကျော် လူကြိုက်များခဲ့တဲ့ ဒွိန်းဂျွန်ဆင် (Dwayne Johnson) ဟာ နပန်းလောက ကနေအနားယူပြီးနောက်ပိုင်း ဟောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်လောက ကိုခြေစုံပစ်ဝင်ခဲ့ပါတယ်။ shwekhitonlinetv.com နှစ်လိုဖွယ်အပြုံးတွေ ယောကျ်ားပီသတဲ့သွင်ပြင်နဲ့ နှစ်လိုဖွယ်ကောင်းတဲ့ ဟန်ပန်အမူအရာတွေကြောင့် ဒွိန်းဂျွန်ဆင် (Dwayne Johnson) ကို မသိတဲ့လူကတော့ ရှားလှပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ခက်ခဲကြမ်းတမ်းလွန်းတဲ့ သူ့ရဲ့ငယ်ဘဝအဖြစ်အပျက် အချို့နဲ့ တစ်ချို့အကြောင်းအရာတွေကတော့ သိတဲ့သူအတော်လေးကို ရှားမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ shwekhitonlinetv.com ဒါကြောင့်အခု ဆောင်းပါးလေးမှာ […]
အင်တာနက်ပေါ် ပို့စ်တစ်ခုတင်တိုင်း ဒေါ်လာသန်းချီ ဝင်ငွေရနေတဲ့ ကမ္ဘာကျော်ဆယ်လီ (၁၀) ယောက်
August 10, 2021 Shwe Khit Online TV 0
Shwe Khit ပရိသတ်ကြီးကို ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့် အကြောင်းအရာကတော့ နာမည်ကျော် စီးပွားရေးမဂ္ဂဇင်းတစ်စောင်ဖြစ်တဲ့ Forbes ကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ ပို့်စ်တစ်ခုတင်တိုင်း ဝင်ငွေအကောင်းဆုံး Celebrity (၁၀) ဦးအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကဲ … ဘယ်သူတွေဖြစ်မလဲဆိုတာ ကြည့်လိုက်ကြရအောင် …. shwekhitonlinetv.com ၁။ C.Ronaldo ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်တွေ အဆိုတော်တွေနဲ့ မော်ဒယ်လ်တွေ အများစုနေရာယူထားတဲ့ ဒီစာရင်းမှာ အားကစားလောကရဲ့ကြယ်တစ်ပွင့်ဖြစ်တဲ့ ပေါ်တူဂီ ဘောလုံးအကျော်အမော် စီရော်နယ်လ်ဒို ကလည်း၎င်းတို့နဲ့ အပြိုင်နှစ်စဉ် ရပ်တည်လာခဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ သူရဲ့ […]
အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ငွေရှာပြီး သူဌေးဖြစ်သွားကြတဲ့ သူတွေအကြောင်း
July 26, 2021 Yan 0
ပရိသတ်ကြီးကို အခုတစ်ခါပြောပြပေးချင်တဲ့ အကြောင်းအရာလေးကတော့ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ငွေရှာပြီး သူဌေးဖြစ်သွားကြသူတွေ အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ အခုပြောပြပေးမယ့် သူတွေဟာ လူတိုင်းနီးပါး ထိတွေ့အသုံးပြုကြနေတဲ့ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ဘယ်လိုမျိုး ဝင်ငွေရှာဖွေပြီး အောင်မြင်တဲ့ လမ်းကြောင်းကို တည်ဆောက်သွားကြတာလဲဆိုတာကိုတော့ အောက်ကပုံလေးတွေ တစ်ပုံချင်းစီကို ကြည့်လိုက်ပါဦးနော်…. shwekhitonlinetv.com ၁ ။ Jeff Bezos Jeff Bezos ကိုတော့ ( ( ၁၉၆၄ ) ခုနှစ် […]
အရမ်းချမ်းသာပြီးမှ ဆင်းရဲသွားကြသော ကမ္ဘာကျော် ဆယ်လီ တစ်ချို့ရဲ့ အဖြစ်အပျက်များ
June 29, 2021 Yan 0
ပရိသတ်ကြီးကို အခုတစ်ခါ ပြောပြပေးချင်တဲ့ အကြောင်းအရာလေးကတော့ အရမ်းချမ်းသာပြီးမှ ဆင်းရဲသွားကြတဲ့ ကမ္ဘာကျော် ဆယ်လီ တစ်ချို့ရဲ့ အဖြစ်အပျက် တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ စည်းစိမ် ငွေ ဆိုတာ မတည်မြဲ ဘူးဆိုတဲ့ သဘောတရားက မှန်ပေမယ့်လည်း သုံးမကုန်လောက်အောင် ချမ်းသာပြီးမှ ကမ္ဘာကျော် ဆယ်လီတစ်ချို့ ဘာကြောင့် ဆင်းရဲသွားကြလဲ ဆိုတာကတော့ အောက်ကပုံလေးတွေ တစ်ပုံချင်းစီကို ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါဦးနော် …. shwekhitonlinetv.com ၁ ။ မိုက်ကယ် […]
ဂျိမ်းစ်ဘွန်းဇာတ်ကောင်ကို ကမ္ဘာကျော်စေခဲ့တဲ့ ဒိတ်ဒိတ်ကြဲ မင်းသားကြီးများ